Buza ukulinganisa: Iyiphi Indlela Elula kakhulu Ukuqeda Ugaxekile Wokudluliselwa
Ngemuva kokufaka i-Google Analytics, uma ubona ukuthi ithrekhi yakho iye yanda ngokungenasici, kuyisibonakaliso sokuthi iwebhusayithi yakho ithola ukubukwa okungalungile futhi kufanele uthathe izinyathelo zokuziqeda ngokushesha ngangokunokwenzeka.
I-Artem Abgarian, iMenenja Ephumelelayo Yempumelelo Yekhasimende Semalt , ixwayisa ngokuthi ngeshwa, ayikho indlela esethiwe yokususa ugaxekile kusuka ku-Google Analytics unomphela. Noma kunjalo, unganciphisa izingozi ngokuthatha izindlela eziningi.
I-spam bots kanye nokusetshenziswa kwazo
Esinye sezizathu eziyinhloko esithola ukuthunyelwa kogaxekile yi-bots spam. Abaduni bawaklama ngezindlela eziningi futhi bazama ukubandakanya inqwaba yabantu ngokuqhaqha amawebhusayithi abo. Bathumela izixhumanisi ezibandakanya ebhokisini lakho lokungenayo futhi bazenze ukuthi bangakwazi ukukhiqiza eziningi zethrafikhi. Uma uchofoza kulawo maxhumanisi, uzobona ukuthi isayithi lakho lithola okuningi, kodwa lo mgwaqo awuhlangene nhlobo. Abaduni ngempela basebenzisa ama-bots spam ukukukhohlisa.
Izinhlobo zokudluliselwa kogaxekile
I-bots yama-spam isebenzisa izindlela ezihlukahlukene zokudala ugaxekile wokudluliselwa: nge-ghost referrals kanye nokudluliswa kwezinkukhu. I-Google Analytics ayikwazi ukuhlola noma ukwahlulela okuyinto yokudluliselwa kwemikhumbi kanye nalokho okudluliselwa kuyo. Ama-referrals ama-ghost avela lapho i-Google Analytics yakho ishaywa yimoto engafaka noma engaziwa, ngenkathi ukudluliselwa kwezinyawo kwenzeka lapho isayithi lakho lithola inombolo enkulu yemibono evela emithonjeni engaziwa. Udinga ukususa amabhubhu ngoba kufanele unciphise umthwalo kumaseva wakho namawebhusayithi wakho. Kubalulekile ukuthola idatha enembile evela ku-Google Analytics empilweni yakho yesayithi..
Izizinda Ezidlulisiwe Zokudlulisa Ugaxekile
Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi kunezizinda eziningi zogaxekile kodwa ezidumile ziyi-darodar.com, ilovevitaly.co, semalt.com, nezinkinobho-for-website.com. Kubalulekile ukuhlala kude nalawa mawebhusayithi namanye amasayithi afanayo njengoba angalimaza isayithi lakho futhi angonakalisa i-Google AdSense.
Ukususwa kweBot Behaved Bots and Spiders
Ungasusa iziphequluli eziziphethe kahle kusuka kubamba yakho ngokulungisa izilungiselelo zakho. Uma ungawavimbeli noma ususe ngokushesha ngangokunokwenzeka, kunamathuba wokuthi isayithi lakho lizolimala. Iningi lama-bots kanye nezicabucabu libukela indawo, kodwa empeleni lilimaza idatha yakho ye-inthanethi ne-intanethi. I-Google Analytics inikeza amadili, amacebiso, amacebo, neziphakamiso ezihlukahlukene ukuze ususe kuwebhusayithi yakho. Ungaya esigabeni somqondisi ukuhlola izibuyekezo ezintsha bese ulungisa izilungiselelo zakho ngokufanele.
Nendlela Susa ama-Ghost Referrals?
Ngemva kokuhlola amanye amadili, ngithole ukuthi kulula ukuvimbela ukuthungelwa kweghost ngokufaka futhi kusebenze izihlungi zakho. Qinisekisa ukuthi usebenzisa izihlungi ezihlukahlukene ukukhulisa ukuvikelwa kwakho kwe-intanethi. Kumele futhi usethe izihlungi zomsebenzisi zempesheni ezivumelekile. Ngenxa yalokhu, kuzodingeka ufake i-ID yakho yokulandelela noma inombolo. Ngicela ngikutshele lapha ukuthi ama-bots ahlakaniphile kakhulu; ngeke bavumele noma yikuphi ithuba lokuya lapho isayithi lakho noma iGoogle Analytics engonakali.
Susa igaxekile lokudlulisa umgwaqo
Uma usuhlele izilungiselelo ezingenhla, isinyathelo esilandelayo ukufaka isihlungi segama lomsindisi esizogcina isayithi lakho ne-Google Analytics ephephile ekusakazweni kogaxekile. Akufanele ukhohlwe ukuthi abakwa-crawlers bavakashela isayithi lakho njalo bese bezama ukulimaza idatha yakho. Yingakho kufanele ususe kuzo kokubili isayithi lakho ne-Analytics ekuqaleni kwakho.